Isaga seBattlefield sizofika i-iOS ne-Android ngo-2022 | Izindaba ze-IPhone
Isaga seBattlefield sizofika ku-iOS naku-Android ngo-2022
U-Ignacio Sala | 24/04/2021 12:00 | Imidlalo ye-IPhone
Ngemuva kokulinda cishe iminyaka emibili, ezinsukwini ezimbalwa ezedlule abafana abavela e-Respawn ekugcineni bamemezele umgwaqo wendlela wokwethula i- impi royale Apex Legends kumadivayisi eselula. Kepha kubonakala kunjalo ngeke kube yisihloko kuphela esitholakala ngaphansi kwesambulela se-Electronics Arts okuzophinde futhi kwenzeke ukufika kwayo kuma-mobiles.
I-EA imemezele ukuthi ngo-2022, izokwethula Indawo yempi yamadivayisi eselula. Lo mdubuli ongumuntu wokuqala uzojoyina zombili i-Apex Legends ne-Call of Duty Mobile, i-PUBG futhi uma izinto zilungiswa nge-Epic, nayo i-Fortnite, yize lokhu kungumuntu wesithathu, singakubheka futhi esikhwameni esifanayo.
I-EA imemezele lokhu kukhishwa okuzayo ngesitatimende lapho ithi khona unjiniyela ophethe ukufaka umdlalo ngama-Toys Ezimboni.
U-Oskar Gabrielson, isikhulu esiphezulu se-DICE uthi:
Ungalenzi iphutha: ngumdlalo ozimele. Umdlalo ohluke ngokuphelele kulowo esiwudizayinela ama-consoles ne-PC, enzelwe ngqo ipulatifomu yeselula. Kuyakhiwa kusukela ekuqaleni ngama-IToys ukwenza ifayili le- Battlefield okudlalekayo noma kuphi futhi ungalindela umuzwa oyingqayizivele osuselwa kumakhono. Lo mdlalo weselula ungena esikhathini sokuhlola ukwethulwa ngonyaka ozayo, ngakho-ke sinethemba lokuthi sizothola eminye imininingwane maduze.
Kubukeka sengathi ku-Electronics Arts abafuni ukuletha ulwazi olufanayo lokudlala kumadivayisi eselula ukulandela enye indlela. Kokubili i-PUBG ne-Fortnite ikuvumela ukuthi udlale amamephu afanayo futhi unikeze i-gameplay efanayo kuzinhlelo zabo zokusebenza zeselula, ngokungafani ne-Call of Duty: Imfono kabani imephu yayo engahlobene neze nenguqulo ye-PC neziduduzi.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule i-DICE imemezele ukwethulwa kweBattlefield 6 ukuphela kwalo nyaka. Maningi amahlebezi okuthi gxuma ngekhwalithi kanye nemishini abafuna ukuyinikeza ngalesi sihloko esisha mhlawumbe shiya kokubili i-PlayStation 4 ne-Xbox One, yize kungekho lutho oluqinisekisiwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izinhlelo zokusebenza ze-IPhone » Imidlalo ye-IPhone » Isaga seBattlefield sizofika ku-iOS naku-Android ngo-2022
I-AirTag ayihloselwe ukulandelela izingane noma izilwane ezifuywayo ngokusho kwe-Apple
I-iPhone 11 kanye ne-iPhone 12 bazilawula ngabodwa emakethe yase-US ngokusho kwabathengi bamaConsumer Intelligence Research Partners